Xukumadda Somaliland Oo Dib U Celisay Gaadhigii Uu Lahaa Madaxwayne Ku Xigeenka Maamulka Puntland Ee Uu Darawalkii Waday Afduubka Kusoo Galiyay Somaliland |
Xukumadda Somaliland Oo Dib U Celisay Gaadhigii Uu Lahaa Madaxwayne Ku Xigeenka Maamulka Puntland Ee Uu Darawalkii Waday Afduubka Kusoo Galiyay Somaliland
Hargeysa(GNN)War hada soo gaadhaya xafiiska warqabadka shabakada wararka Ramaasnews ayaa sheegay in xukumadda Somaliland ay dib u celisay gaadhgiii uu lahaa madaxwayne ku xigeenka maamulka Puntland ee uu dhawaan darawalkii waday afduub kusoo galiyay Somaliland.
Gaadhigan oo muddo dhawr casho ahba ay gacanta ku hayeen ciidamada qaranka Somaliland ayaa waxay wararku shegayaan in ay ku wareejiyeen ciidamadu saraakiil ka socota dhanka maamulka puntland.
Waxaana gaadhigan ay masuuliyiinta ka socotay labada dawladood ay kula kala waregeen xadka u dhaxeeya dawladaha Somaliland iyo puntland.
Kahor intii aan la wareejin gaadhiga ayaa waftigii ka socday dawlada Somaliland ay saraakiishii ka socotay maamulka puntland ay kala hadleen cabasho uu sheegtay darawalkii waday gaadhiga oo ah inaan wax mushahar ah la siin muddo ku siman laba sanno iyo badh.
Darawalkii madaxwayne ku xigeenka maamulka puntland ayaa isagu sheegay inay sababta uu gaadhiga usoo afduubay ay tahay kadib marki aan wax mushahara la siin muddo laba sano iyo badh waa sida uu sheegaye.
Gabagabadiina talaabadan ay qaatay xukumadda Somaliland ayaa ah talaabo kor u qaadaysa wada shaqaynta iyo ilaalinta nabadgaliyada dawlada Somaliland iyo maamulka puntland.